By Zay Thu Lwin 06:25 TWZ No comments
ဒီ Firmware လေးကို ကျနော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အသေးအသန် အကူညီတောင်းလာလို့ ကျနော်လင့် တင်ထားတာ မရှိတော့ လင့်ချပေးမလို့ Google မှာ ရှာတာ ဒီ Firmware လင့် ရှိနေပေမယ့် လင့်တွေက အားလုံးအဆင်မပြေတာ တွေ့ရလို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ ညီလေးနဲ့ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အလွယ်တစ်ကူ ရှာဖွေရ လွယ်အောင် အကောင်းဆုံး တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ၊၊ ထိုင်းမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ရှားပါတဲ့ Firmware ကို အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီဗျာ.အဆင်ပြေကြပါစေ၊၊
IOS 8.3 Jailbreak ကို 20% မှာတင်ရပ်နေသူများအတွက်
By Zay Thu Lwin 08:22 I Phone No comments
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ IOS 8.3 Jailbreak လေးလာပါပြီဗျာ ထွက်ထွက်ချင်းတင်ပေးမလို့ပါဘဲ ဒါပေမယ့်အကုန်အဆင်မပြေကြဘူးဆိုလို့ အဆင်ပြေမယ်နည်းလမ်းလေးရှာနေလို့ နည်းနည်းနောက်ကြသွားတာ တောင်းပန်ပါတယ် ဒီနည်းလေးကိုကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးမှတင်ပေးတာပါ Windows တိုင်းအဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းလေးပါ တချို့ဆို 20% ရောက်မှဆက်မတက်တော့ဘဲ Restart နဲ့လည်နေတာနဲ့ iTune ကိုဗားရှင်းအနိမ့်ဆင်းလိုက်လို့ Error တက်တာနဲ့ ဖြစ်နေကြပါတယ် ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းလေးအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ အားလုံးအဆင်ပြေပါမယ် ကဲလိုအပ်တာလေးတွေအောက်မှဒေါင်းပါ
အပေါ်မှပြထားတဲ့3ခုကို Control Panel ထဲဝင်ပြီး unstall လုပ်လိုက်ပါ
အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Computer-Libraries-Music-iTunes ထဲသွားပြီးမျှားပြထားတဲ့ဖိုင်ကို အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း Rename ပြန်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Computer ကို Restart ချလိုက်ပါ ပြန်တက်လာရင် iTunes ကို install ပြန်လုပ် TaiGJBreak ကိုဖွင့် ဖုန်းမှာ iCloud ထဲဝင် Find My iPhone ကို OFF လုပ် Passcode ကို Off ပြီးရင် Airplane Mode ကိုဖွင့် Computer နဲ့ချိတ် Jailbreak လုပ်လို့ရပါပြီ ကဲအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
Samsung USB Driver 159 မျိုး
By Zay Thu Lwin 06:20 Driver No comments
Samsung USB Driver 159 မျိုးကိုတစ်နေရာတည်းမှာဒေါင်းနိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
MoziliaFirefox မှာ Internet Download Manager မရသူများအတွက်
By Zay Thu Lwin 07:15 နည်းလမ်းများ No comments
အပေါ်ကပြထားသလို Youtube ကသီချင်းဖွင့်လိုက်ရင် IDM မပေါ်လို့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် IDM နဲ့ဒေါင်းလို့ရအောင် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုမျှဝေပေးသွားပါမယ် ပထမဆုံး http://www.internetdownloadmanager.com/register/new_faq/bi4_1.html ဒီလင့်ကို firefox နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ
အပေါ်ကပုံလိုပေါ်လာရင် Install ကိုနှိပ်ပါ
အပေါ်ကပြထားသလို Ass-ons ကိုနှိပ်ပါ
အပေါ်ကပြထားသလို install Ass-on from file ကိုနှိပ်ပါ
ခုနကဒေါင်းထားတဲ့ဟာကိုရွေးပြီး open ကိုနှိပ်ပါ
အပေါ်ကပြထားတဲ့အတိုင်း Install Now ကိုနှိပ်ပါ
အပေါ်မှာပြထားသလို Restart Now ကိုနှိပ်ပါ ပိတ်သွားပြီးပြန်ပွင့်လာရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း IDM လေးပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ် အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
By Zay Thu Lwin 05:05 No comments
File Size (43.4) MB
အလကားရလို့တော့လျှော့မတွက်နဲ့နော် ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရင် ၃၉၉$ ဒေါ်လာရှိတယ်။
pass cord.txt ဖိုင်ပါပါတယ်။ license name နဲ့ upgrade license code ကို First state အောက်ကဟာထည့်ပါ။
နောက်ထပ်တစ်ခါ User name နဲ့ upgrade license code ကို Second cord အောက်ကဟာထည့်ပါ။
Note3N900 5.0 မြန်မာဖောင့်ပါပြီးသားနှင့် Root. Cwm ထည့်မယ်
By Zay Thu Lwin 06:21 Samsung Firmware No comments
Note3ကို 5.0 တင်ပြီးမြန်မာဖောင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများအတွက် offical မြန်မာဖောင့်ပါပြီးသား Firmware တင်ပြီး Root နှင့် Cwm ထည့်ကြရအောင် ကဲအရင်ဆုံးလိုအပ်တာလေးတွေကို အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ
Note3Firmware ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ
recovery move ထဲဝင်
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲကအတိုင်း odin ဖွင့် driver သိလို့မီးလင်းရင် firmware ထည့်ပြီးတင်လိုက်ပါ Root လုပ်တာတို့ CWM ထည့်တာတို့ကိုလဲ firmware ထည့်တဲ့နေရာမှာဘဲထည့်ရမှာပါ
Firmware တင်ပြီးရင်မြန်မာဖောင့်ကို Setting ထဲက Language ထဲမှာ မြန်မာ (Zawgyi) ဆိုပြီးထားပေးလိုက်ပါ Browser ထဲမှာမမှန်ရင် browser ထဲဝင် Menu ကိုနှိပ် Zawgyi ဆိုပြီးပြောင်းပေးလိုက်ပါ
HANDSET အမျိုးပေါင်းတစ်ရာကျော်ကို ROOT ဖောက်ပြထားသော.စာအုပ်
By Zay Thu Lwin 08:03 Ebooks No comments
DTAC Phone 4.5 ZTE-V830W Root ဖောက်နည်း
By Zay Thu Lwin 08:25 Root လုပ်နည်းများ No comments
ZTE-V830W Root ဖောက်နည်းတောင်းဆိုထားတဲ့ ဘော်ဘော်များအတွက် အောက်ကVideo File လေးကြည့်ပြီးလုပ်ကြပါ ကျွန်တော်ကဖုန်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ၀ါသနာအရတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်တွေ့လုပ်မပြနိုင်လို့ ယိုးဒယားအသံပါ Video File လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Kingo Root ဒေါင်းရန်
Internet Download Manager အဆင်မပြေသူများအတွက်
By Zay Thu Lwin 08:06 Software No comments
Internet Download Manager ကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေသူများအတွက် ကျွန်တော်နည်းပညာမြို့တော်ကမထားတာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် Install လုပ်ရတာလွယ်ကူသလို သုံးရတာလဲအဆင်ပြေပါတယ် စာတန်းတွေလဲခဏခဏမတက်ပါဘူး ကဲ Install လုပ်နည်းလေးပြောမယ်နော် အရင်ဆုံးဒေါင်းရတဲ့ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး Rum လိုက်ပါ အောက်ပါပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်
အပေါ်ကပုံပေါ်လာရင် Install File ကိုနှိပ်ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ
နောက်ပြီး internet ကိုပိတ်ပြီး Crack.exe ကိုနှိပ်ပါ
နောက်ဆုံး ပိုသေချာအောင် Key.reg ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Full Version အဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရပါပြီ
Youtube ကနေကိုကြိုက်တဲ့သီချင်းကို MP3 အနေနဲ့ဒေါင်းယူနည်း
By Zay Thu Lwin 07:21 နည်းလမ်းများ No comments
ကဲမတင်ဖြစ်တာတော့ကြာသွားပြီ အလုပ်ရှုပ်နေလို့မတင်ဖြစ်တာ တောင်းပန်ပါတယ် အခုတစ်ခါတင်မှာကတော့ Youtube ထဲကကိုကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေကို ဘာconverterမှမလိုဘဲ Mp3အနေနဲ့ဒေါင်းယူတဲ့နည်းလေးပါ ပထမဆုံး Youtube ကိုသွားလိုက်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့သီချင်းကိုရှာပါ
အောက်ကပုံလိုပေါ်လာရင် မြှားပြထားတဲ့နေရာကလင့်ကို select ပေးပြီး copy လုပ်ပါ
1 မြှားပြထားတဲ့အတိုင်းနာက်ပြီး Youtube to mp3 ဆိုပြီးရိုက်ရှာပါ
အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း နံပါတ်1 နေရာမှာ Youtube က Copy ကူးလာတဲ့ဟာကို Paste လုပ်ပါ နံပါတ်2 မြှားပြထားတဲ့နေရာမှာ convert Video ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးခဏစောင့်ပါ နံပါတ်3 နေရာမှာ download ဆိုပြီးပေါ်လာရင် နှိပ်ပြီးဒေါင်းနိုင်ပါပြီ
နိူင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာစာတန်းထိုးမယ်
နိူင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာစာတန်းထိုး လုပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေ ၃ ၊ ၄ မျိုးလောက်ရှိပါတယ်။ (ကာရာအိုကေ စာတန်းထိုးမဟုတ်ပါ)။ Adobe Phot...
♫ မိုးစက်တင်လေ ♫ 1. အချစ်ရှုံးသမားဒဿဂီရိ 2. ဟာသ 3. ရင်တွင်းမေ 4.ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် 5.မိုးစက်တင်လေ 6.ဟိုအစ်ကိုကြီးရဲ့မခင်နှင...
I Mobile IQ 6.9 Dtv ကို Firmware ပြန်တင်နည်း
I Mobile IQ 6.9 Dtv ကိုင်ဆောင်ကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် အကြောင်းအမျိုး logo မှာရပ်နေပြီ တိုင်ပတ်နေရင် အလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်နိုင်ဖို့ လိုအပ...
DTAC Joey Fit 4.5 (ZTE-V830W ) ကို Firmware ပြန်တင်နည်း
ထိုင်းမှာ ဈေးသက်သာတဲ့ ဖုန်းတွေထဲက နောက်ထက်အသုံးပြုများတဲ့ Dtac ကုမဏီ တံဆိပ်ကပ် Zte V830W ဖုန်းတွေ အသုံးပြုကြတဲ့ ဘော်ဒါများ အကြောင်းအမ...
အိမ်ရှင်မများအတွက် နေ့စဉ်သုံး မိသားစု ဟင်းချက်နည်းအမျိုးမျိုးစာအုပ်
အိမ်ရှင်မများအတွက် နေ့စဉ်သုံး မိသားစု ဟင်းချက်နည်းအမျိုးမျိုးစာအုပ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ယခုမှ မီးဖိုချောင်ဝင်မည့်သူများ၊ အိမ်ရှင်မများ ...
ဒီ Firmware လေးကို ကျနော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အသေးအသန် အကူညီတောင်းလာလို့ ကျနော်လင့် တင်ထားတာ မရှိတော့ လင့်ချပေးမလို့ Google မှာ ရှာတာ ဒီ Fi...
Coolpad Firmware တင်နည်းစာအုပ်
Coolpad ဖုန်းလေးတွေ ဈေးကွက်ဝင် အသုံးများလာနေ.... Service လုပ်ပေးရင်း ဖန်လုံးပြန်တင်ဖို့လိုလာတဲ့အခါ .... တစ်ခါတရံ ....How to..????...
ဒါကတော့ ချစ်သူရှိတဲ့ စုံတွဲတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့အရာပါ။ ဗေဒင်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် အထူးကောင်းစေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ပိုပြီ...
Blog လုပ်ချင်သူတွေအတွက် Blog လုပ်နည်းအပြည့်အစုံ
မိမိမှာ Gmail Account တစ်ခုရှိပြီး၊ မြန်မာလိုစာစီနိုင်ရန်အတွက် ZawGyi Font ကိုလည်း Install ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင် Blog တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီး နိုင...
Play Store Error ဖြေရှင်းနည်း
Copyright © ရေနံ့သာမောင်ကြီး | ရေးသားတင်ဆက်သူ ဇေသူလွင်
မေလွင်(စတိုး) | မြို့မတောင်ရုံးရပ် | ရေနံချောင်းမြို့ လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်